"Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao Ahy, mba ho iray izy, tahaka ny mahiray Antsika: Izaho ao aminy, ary, Hianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatr'izao tontolo izao fa Hianao efa naniraka Ahy sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao Ahy" - Jao. 17:22,23.
Endrey izany zava-kendrena tokony hotratrarin'ny Kristianina kanefa kely dia kely tokoa no vitantsika. Rehefa mifanaraka amin'ny baikon'ny Tompontsika ny zavatra ataontsika dia ho be voninahitra tokoa ny valiny. Izao no nambarany: "Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino Ahy koa noho ny teniny; mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy; mba hinoan'izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy" - Jao. 17:20,21 (...)
Tsy nivavaka ho an'ny zavatra izay tsy ho vitantsika i Jesôsy, ary raha toa ka azo tratrarina izany firaisana izany dia maninona ireo izay milaza ny tenany ho mpanara-dia an'i Kristy no tsy hikatsaka fatratra izany fepetra ahazoana fahasoavana izany? Rehefa iray ao amin'i Kristy isika dia iray amin'ireo mpanara-dia Azy koa. I Jesôsy no tena irin'ny fanahy indrindra, dia Ilay fanantenana be voninahitra. Amin'ny alalan'ny Fanahy Masina no hanatrarana izany firaisana izany, ka ho fatratra ny fitiavana ny rahalahy, ary ho fantatry ny olon-drehetra fa niaraka tamin'i Jesôsy isika sady nianatra taminy. Ho hita taratra eo amin'ny fiainantsika ny toetrany masina. Koa satria Izy no inoantsika, dia haneho ny fahalemem-panahiny sy ny fitondran-tenany feno fahatsorana isika. Tsy maintsy mamaly ny vavaka nataon'i Kristy ny isam-batan'olona amin'ny fiangonan'Andriamanitra, mandra-pahatongantsika rehetra ao anatin'ny firaisan'ny Fanahy.
Inona no mahatonga ny fifanoherana sy ny fifandirana? Izany no vokatry ny fihatahana amin'i Kristy. Rehefa lavitra Azy isika dia very ny fitiavantsika Azy, ary miha-mangatsiaka ny fitiavantsika ny mpanara-dia Azy. Arakaraka ny ihatahan'ny hazavana amin'ny ivony no iparitahany. Ny mpino tsirairay avy dia tara-pahazavana avy eo amin'i Kristy, ilay Masoandron'ny fahamarinana. Arakaraka ny andehanantsika miaraka amin'i Kristy, izay ivon'ny fitiavana sy ny hazavana rehetra, no itomboan'ny fitiavantsika ho an'ireo mpitondra ny hazavany. Rehefa voataona hanakaiky an'i Kristy ny mpino dia ilain'izy ireo ny mifanatona, satria ilay fahasoavan'i Kristy mitondra fahamasinana no hampifamatotra ny fon'izy ireo. Tsy mitombina ny hoe: tia an'Andriamanitra ianao kanefa tsy tia ny rahalahinao — EGWM, tt. 1048,1049.